warbaahinada casriga ah culayska ay ku hayaan warbaahinti caadiga ahayd – ዜና ከምንጩ
ትንታኔ 45 0
ጠቃሚ የምርጫ መረጃዎች 62 0
warbaahinada casriga ah culayska ay ku hayaan warbaahinti caadiga ahayd
Baraha bulshada oo noqday xogaha wararka awgeed ayaa warbaahinadii hore oo liita oo qaarkoodna ay ku wada bireen warbahinada casriga ah ayaa la arkaa, si gaar ahna waxa u aad u saameeyay wargaysyada la daabaco.
wararkii caadiga ahaa ee la baahin jiray inta laga baxay ayaa waxa loo gudbay war baahino cusub oo casri ah. waxa hubaal ah in warbaahindi hore ay dadka u soo tabin jireen warar hubaal ah,balse xiligan xaadirka ahna baraha bulshada ayaa saamayn wayn ku haya war baahinadi hore.
xarun ku takhasustay cilmi baadhka saxaafada oo fadhigeedu yahay ingriiska oo layidhaahdo ‘’yougov’’ ayaa cilmi baadh ku samaysay arinta ku saabsan baraha bulshada, in kasta oo caalamka ay jiraan fursado badan oo dadku ay ku helaan wararka hadana xiligan xaadirka ah dhalinyaradu in meesha kawaad ee ay wararka ka helaan ay tahay baraha bulshada.
wiil magaciisa la yidhaahdo Melaaku Alemayehu oo dhawr iyo labaatan jir ah ayaa sheegay in u bilaabay isticmaalka baraha bulshada asaga oo dugsiga sare wax ka barta. waxa u yidhi marki hore waxa aan ku bilaabay in aan isticmaalo baraha bulshada in dadka aan kala xidhiidho oo aan kala sheekeysto oo kaliya, balse xiligan xaadirka ah waxa aan baraha bulshada u gala si aan wararka ugala socdo.waxa aanan u doortay baraha bulshada buu yidhi madaama ay wararka sida ugu dhakhsaha badan ay u soo daayaan marka la barbar dhigo war baahinada kale. war baahinada ugu waawayni waxa ay wararka soo daayaan marka ay baraha bulshadu ka waramaan oo ay dhameeyaan ka dib sidaasi ayaanan ku doortay baraha bulshada.
melaaku oo sheegay in wararka baraha bulshadu aan la hubin wararkoodu in ay dhab yihiin iyo in kale, ayaa hadana war baahinada kale oo looga baahna in ay kala cadeeyaan wararka dhabta ah iyo kuwa kutidhi kuteenta ah hawshoodi gabay kuwaasi oo aadna u soo daaha mana aha kuwo xiiso galinaya waa war la maqlay xiiso ma leh oo kale, sidaasi darteed waxa aan door bida in aan ka helo wararka baraha bulshada.
war baahinada caadiga ah madaama ay xogta iyo wararkaba aanay bulshada soo gaadhsiinin xiliga loo baahanyahay waa arin aad loogu dhaleeceeyo.
Dhemeke Kebede oo wariye ah ayaa yidhi xiligan xaadirka ah arimaha caalamka ka jira marka loo fiirsado waxa aanu kolba u kala wareegna war baahinada kala duwan kolba mid, in kasta oo baryihi hore war baahinada la daabaco ay kaalinta ugu balaadhan ku haysteen soo daynta xogaha, hadana wargaysyada la daabaco waxa looga gudbay raadyaha, raadyahan waxa looga gudbay tviiga, tviyadiina waxa looga gudbay baraha bulshada sidaas darteed imika waxa la jooga xiligii war baahinada casriga loo wada wareegay.
waxa kale oo u yidhi maadama warbaahinada casriga ah sida raadyaha loo dhagaysto oo sida tviigana loo daawdao sidi jaraaidkana loo akhristo ayaa bulshada waxa ay u noqotay fursad wayn.
sababahaas aan kor ku soo xusnay iyo sababo kale oo la xidhiidha ayaa ka dhigaya in baraha bulshadu ay fursad u noqoto in ay ka horeeyaan war baahiada caadiga ah, sida oo kale dadka ku xidhan baraha bulshada oo hor mud ku ah gaadhsiinta wararka cusub ayaa ka dhigaya in dadku ay doorashadooda kowaad ka dhigtaan baraha bulshada.
waxa kale oo wariye Dhemeke Kebedhe u yidhi cid kasta oo istidhaahda waxa aad haysa xog waxa u ugudbiin kara cid kasta. taasina waxa ay tahay xoriyad u ku dhaamo war baahinada editooriyaalka lagu hago .
baraha bulshada ayaa ah mid shakhsiyaadku fikirkooda ay ku dhiiban karaan, sidaas darteed dadku waxa ay si dhakhso badan u gaadhsiin karaan xogta si ka fiican war baahinada caadiga ah. waxa in taasi dheer bu yidhi in warar soo jiidasho leh oo ku salaysan rabitaanka dadka xogta ku saabsan in ay u soo ban dhigaan oo fursado shaqo abuur ahna laga helo.
marba marka ka danbaysana waxa la arkaa in war baahinada casrigu ay gilgileen awooda war baahinada caadiga ah qaar ka mid ah. ayada oo ay arintu ay sidaasi tahayna hadana war baahinada casrigu ka ma soo xigtaan wararka ayuu yidhi wariyuhu.
guud ahaan bu yidhi wariyuhu sababta ay u liitaan war baahinada caadigu ayaan ahayn oo kaliya sababta la xidhiidha war baahinada casriga gaarr ahaana baraha bulshada ah oo kaliya ee taasi waa sababta kowaad.
waxa sababta ugu horaysa ah buu yidhi in ay ka badiso war baahinta casriga ahi tan caadiga ah ayaa ah xogta ay ku soo qaadanayaan waxa ay ku salaysantahay, xogta ay ku soo qaadanayaan hadii ay liidato lama jaan qaadi karaan kuwa kula tartamaya khadka.
war baahinada caadigu in kasta oo ay haystaan fursado qalab casri ah ay ku helaan iyo shaqaale ku filanba oo hadana ay awoodi karaan in ay soo tabiyaan wararka dagdaga ah iyo waxyaabaha la midka ah in ay la baratamaan baraha bulshada waxa ay ku noqotay caqabad, in kasta oo war baahinada caadiga ah ee dalku ay rabaan in ay soo tabiyaan xogta sida tooska ah oo ay kharash aad u badan ku bixiyaan sababto ah kharashka lagu bixiyo wararka tooska ah iyo qalabkuba waa mid u baahan kharash aad u badan. awooda shaqaale ee halkaasi ay u baahantahayna waa mid aan lasoo koobi karin. xiligan xaadirka ahna madaama dad badani ayaga oo isticmaalaya moobayiladooda gacanta ee casriga ah wax kasta oo dhaca ay war baahinada caadiga ahi ay ku gaadhi kari waayeen kuwa casriga ah sidaasi ayaanay ku awooden in dadka oo dhan ay soo jiitaan.
waxa u yidhi Dhemeke oo ku hawlan hawshan war baahinada caadigu waxa ay ka shaqeeyaan oo ay wararka ka soo diraan meelo kooban oo la xushay oo kaliya, arintanina waxa ay saamayn ku noqonaysa in ay la tartamaan baraha bulshada oo ay warar dagdag ah bulshada soo gaadhsiiyaan. kuwa ka baxsan war baahinada caadiga ahi se meel kasta oo ay joogan ayada oo aanay xadiidin fogaanshahu xog kasta oo ay helaan si dagdag ah ayay u soo gaadhsiyaan kuwa taabacsan, taasina waxa ay ka dhigtay in xagooda loo janjeedhsado.
Berekrt Selemoon oo ah mid kamidah dadka fikradahooda ka dhiibtay war baahinada ayaa yidhi matalan xiligan xaadirka ah in aan tv ama raadyaha aan wax ka dhagaysto ama kadaawado saacad uun aan sugo si aan u helo warar, wax igu khasbaya ma jiraan ee waxa aan xog ka heli kara fursada ay isiisay teeknoolojiyadu, aniga oo ka heli kara xog war baahinada casriga ah maxaa i sugsiinaya kuwa caadiga ah, in kasta oo u yidhi wararka laga siidaayo baraha bulshada aan aad loo hubin xaqiiqdooda hadana waxa aan kolba ka eegan kara kuwo kala duduwan si aan u helo xogta xaqiiqda ah. waxa kale oo u sheegay in war baahinada casriga ahi ay adeeg hufan bixiyaan marka loo eego wararka dagdaga ah iyo kuwa cusubba.
waxa hubaal ah in war baahinada casriga ahi ay soo jiitaan dadka intooda badan. dadka sida aadka ah u isticmaalana waxa u badan dhalinyarada. maadama ay dadka aadka u isticmaalana ay dhalinyaro u badanyihiin in cidhif ilaa cidhf wararka la is gaadhsiiyo ayay u sahashay.
arinta ugu wayn ee in loo fiirsado ah ayaa ah arinta jiilka cusub. jiilka cusub ee xiligan jira waa qaar isticmaala teknolojiyada casriga ah. teeknolojiyada casriga ah ee ay istcmaalayaana waxa ay ka dhigaysa in xog balaadhan ay helaan, sidaas darteedna ayaga oon war baahinta caadiga ah taabicin ayay warar cusub helayaan bu yidhi wariye Dhemeke Kebedhe.
wariyahaasi oo sii faahfaahiyay hadalkiisa ayaa yidhi inwar baahinada caadiga ahi xog ay soo gudbiyaan oo ay warar tayo leh gaadhsiiyan bulshada waxa jira dadaloolo badan. waxana ay arintaasi ku mutaysteen in ay warar dagdag ah oo tayo leh fagaaraha lagu taratamaayo ay la iman kari waayaan.
waxa kale oo intaasi dheer bu yidhi war baahinada dalku intooda badan waa qaar ku qanacsada ama lacago ka hela dawlada,sidaasi darteed inta badan wax ay u shaqeeyan oo ay ku khasbanyihin kolba halki ay dakhli ka heli karaan. taasina waxa ay ku keentay in war baahinada casrigu ay kaga horeeyaan in ay wararka sida dagdaga ah ugu soo bandhigaan bulshada oo ay ka horeeyaan.
aqooonyahaaninta qaar ayaa sheegaya in looga baahna warbaahinada dalka ee caadiga ah in ay ayagu xogta siyaan baraha bulshada, balse ay arintaasi noqotay caksi oo ay war baahinada dalku ay ka soo xigtaan xogta baraha bulshada taasina ay tahay arin khalad ah.
sida u wariyr Dhemeke Kebedhe u fikirkiisa ugu sheegay wargayska addis maleda ayaa ah in labada dhinacba xagaha qodobada ay ku soo qaadanayaan ay ka muuqato hawl dhayalsi. sidaas darteedna ay labada qayboodba dadaalka ay ugu jiraan in ay wax yaabaha ay ku soo qaadanayaan xogtoda midna aanu midka kale waxba dhaamin.
waxa kale oo u yidhi wariyuhu war baahinada casriga ah ee baraha bulshada dhibaatada ugu wayn ee ka jirta ayaa ah xogta ay siidaynayaan oo aan inta badan run ahayn, sidaas darteed wararka dhinacooda laga helayo ay ka muuqato saamayn aad u balaadhan, sida oo kale war baahinada caadiga ah caqabadaha ka jirana ay labada dhinacba mushkilado kala duwan ay ka jiraan.
in kasta oo baryahan danbe la sameeyay machadyo ay shakhsiyaad kooban ka shaqeeyan si ay u dabo galaan wararka been abuurka ah hadana cid kasta oo ay arintani khusayso in ay fiiro gaar ah siiso ayaa ah mid lama huraan ah. waxa kale oo intaasi dheer oo loo baahanyahay in warbaahinada caadiga ahi si ay u xaliyaan dhibaatooyinka ka jira dhinaca xogta la siidaaynaayo in ay awoodooda oo dhan u istcmaalaan.
Total views : 6421964